အညိုရောင်သို့မဟုတ်ရှေးဟောင်းအဖြူရောင်ဖြင့်ရောင်းချရန် HYC194025 - စျေးပေါ - သစ်သားသေတ္တာများ - ရောင်းရန်။ စိတ်ကြိုက်အရွယ်အစား၊ လိုဂို၊ အရောင်နှင့်ဒီဇိုင်းကိုကြိုဆိုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ဒီဇိုင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏နမူနာအတွက် MOQ တူညီသည်။
၁။ ရိုးရှင်းသောအညိုရောင်အရောင်ရှိသောသစ်သား Nesting သေတ္တာများနှင့်အတူအလှဆင်ထားသောသစ်သားသိုလှောင်သည့်ကွန်တိန်နာသေတ္တာများ၊ ဒီလှပတဲ့သစ်သားသေတ္တာကိုစတိုင်၊ ဒီဇိုင်းနှင့်ဒီဇိုင်းပါရှိသည်။ အလှဆင်ခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်းနှင့်ဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက်အလွန်အသုံး ၀ င်သောစတုဂံအသိုက်သေတ္တာသုံးလုံး။
3. ဤအသိုက်သေတ္တာများသည်လွယ်ကူစွာသိုလှောင်ရန်လွယ်ကူစွာသိုလှောင်ရန်နေရာနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုသက်သာစေသည်။ cutout လက်ကိုင်များသည်သူတို့ကိုလွယ်ကူစွာသယ်ဆောင်သွားစေသည်။
၄။ ဤသည် multi အလုပ်လုပ်သောသစ်သားသေတ္တာကွန်တိန်နာဖြစ်သည်။ ဤသစ်သားသိုလှောင်သေတ္တာများသည်ကစားစရာများ၊ ဂိမ်းများ၊ အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးသည်ကူရှင်များ၊ အိပ်ယာခင်းများ၊ လက်သုတ်ပဝါများ၊
၅ ။ မီးဖိုချောင်ဗီရို၏ထိပ်တွင်ချိုချဉ်ရန်အတွက်အသုံးပြုနိုင်ပြီးကလေးများနေ့စဉ်မစားနိုင်ပါ။
အကြီးစားသေတ္တာများအတွက် 6. အရွယ်အစား: 35x25x15cm ဖြစ်ပါတယ်။3သစ်သားအသိုက် crates.cheap- သစ်သားသေတ္တာ -for- ရောင်းမည်
စိတ်ကြိုက်အရွယ်အစား၊ လိုဂို၊ အရောင်နှင့်ဒီဇိုင်းကိုကြိုဆိုပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ဒီဇိုင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏နမူနာအတွက် MOQ တူညီသည်။
စက်ရုံပုံစံ ကျနော်တို့ FSC အသိအမှတ်ပြုစက်ရုံဖြစ်ကြသည်။ ၁၈ နှစ် FSC အသိအမှတ်ပြုထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီ၊ ၁၆ နှစ် Alibaba ရွှေပေးသွင်းသူ
ပစ္စည်းရွေးချယ်မှု: Paulownia wd၊ ထင်းရှူးပင်၊ ပေါ့ပလာရပ်ကွက်၊ သစ်သား၊ အထပ်၊ MDF
OEM ဝန်ဆောင်မှု: ဟုတ်တယ်
နည်းပညာ ဆေးရောင်၊ ဆေးရောင်၊ လေဆာရောင်ခြယ်မှု၊ ပန်းချီ၊ ဆေးဆိုး၊ မီးလျှံ
နမူနာအချိန် - အကြောင်းကို 5-7 အလုပ်လုပ်ရက်
ထုတ်လုပ်မှုကာလ - ရက်ပေါင်း 40-55 ရက်
MOQ: ပစ္စည်းတစ်ခုချင်းစီအတွက် USD1000.00 နှင့်တင်ပို့မှုနှုန်း USD5000.00 ။
ထုပ်ပိုးအသေးစိတ်: စံထုပ်ပိုးမှု - စက္ကူဖြူ၊ EPE အမြှုပ်စာရွက်၊ ပူဖောင်းအိတ်၊ блистерအထုပ်၊ စာတိုက်ပုံး၊ အတွင်းသေတ္တာ၊ အရောင်ယာဉ်သေတ္တာ၊ စိတ်ကြိုက်ထုပ်ပိုးကြိုဆိုပါတယ်။
ငွေပေးချေမှုသတ်မှတ်ချက်များ: T / T, L / C, Paypal, Western Union, Alibaba ကုန်သွယ်ရေးအာမခံ။
ဖြေ။ ။ ရိုးရိုးနမူနာအနည်းငယ်သာအခမဲ့ဖြစ်ပြီးကုန်ကျစရိတ်များကိုစုဆောင်းခြင်းသို့မဟုတ်ကြိုတင်ပေးချေခြင်းဖြင့်တင်ပို့သည်။ အမိန့်လာသောအခါအားသွင်းနမူနာပြန်အမ်းနိုင်ပါတယ်။
A: Paypal၊ Western Union ကိုကျွန်ုပ်တို့ဘဏ်အကောင့်သို့တိုက်ရိုက်ငွေလွှဲခြင်းနှင့် LC ကြည့်ခြင်းကိုလက်ခံပါသည်။ အထက်ပါအားလုံးမရရှိနိုင်ပါကကျွန်ုပ်တို့သည်သင်အား paypal ငွေတောင်းခံလွှာကိုပေးလိမ့်မည်။ သင်ကရက်ဒစ်ကဒ်ဖြင့်သာငွေပေးချေသည်။
A: ပုံမှန်ဖောက်သည်များအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်လျှော့စျေး၊ နမူနာအခမဲ့ပို့ဆောင်ခြင်း၊ ထုံးစံဒီဇိုင်းအတွက်အခမဲ့နမူနာ၊
သစ်သားသေတ္တာ Box ကို